HomeWararka CaalamkaCiidanka Ukraine oo ka baxay Magaalooyin Muhiim ah kadib Duqeymaha Ruushka
June 24, 2022 Wararka Caalamka, Wararka Maanta, Warka ugu akhriska badan 0
Photo/Vadim Ghirda -TT
Ciidamada Ruushku waxay xoojiyeen go’doominta Donbass ee iska caabbinta Ukraine ee agagaarka magaalooyinka warshadaha istiraatiijiga ah ee Lysichansk iyo Severodonetsk ee ku yaal gobolka Lugansk, kuwaas oo lagu burburiyay madaafiic la isweydaarsaday.
Lysichansk iyo Severodonetsk ayaa ah tallaabo muhiim u ah Ruushka qorshaha ay ku doonayaan in ay kula wareegaan Donbass, oo ah doox ku hadla afka Ruushka oo ay qayb ahaan gacanta ku hayeen kooxaha gooni u goosadka ah ee Moscow taageersan tan iyo 2014-kii.
Badhasaabka Lugansk Sergei Gaidai ayaa ku qoray Telegram subaxnimadii Khamiista in Ruushku “ay kordhinayeen weerarradooda si ay u go’doomiyaan qaybteena.” Waxa uu tilmaamay in ciidamada Ruushka ay qabsadeen magaalooyinka Loskotivka iyo Ray-Oleksandrievka, oo dhowr KM u jira Lyschansk, marka laga soo tago weerarkii ay ku qaadeen Sirotini, oo u dhow Severodonetsk.
Wakiilka gooni u goosadka ee taageersan Ruushka Andrei Maruchko ayaa sheegay Khamiista in iska caabinta Ukraine ee Lysekhansk iyo Severodonetsk ay ahayd “wax aan faa’iido lahayn”.
Badhasaabka gobolka Lugansk, Sergey Gaidai, ayaa Jimcihii sheegay in ciidamada Ukraine lagu qasbi doono inay ka baxaan bariga magaalada Severodonetsk, ka dib markii uu socday dagaal ba’an oo ay kula jiraan Ruushka muddo toddobaadyo ah.